Category: Xanuunada kudhaca maskaxda
Fayoobaanta guud ee caafimaadka jidhka aadamuhu waxa uu had iyo jeer u wada shaqeeyaa si wada socota oo aanay xubini xubinta kale ka maraarmi karin, wixii xanuun ah ee lasoo darsa xubin kamid ah jidhkana waxaa la dareemada xanuunka iyo xumada jidhka intiisa kale. Marka aynu mawduucan maanta si gaar ah uga hadalno waxa uu ku saabsan yahay xaga awooda iyo karitaanka galmo kolba sida ay tahay, sidii loo baahnaa ee dabiiciga ahayd ama si ka hoosaysa oo diciif ah ama si ka saraysa oo xad dhaaf ah.
Qiyaasta dabiiciga ah ee awooda qafku waa wax lagu garto hadba sida ay isticmaalka shaqo ee xubnuhu yihiin xiliga galmada. Qofkasta oo xaalaal ku isticmaala xubnihiisa taranka waxa uu ogaan karaa inuu gaabis kayahay qiyaastii loo baahnaa ama uu xad dhaaf kayahay qiyaastii loo baahnaa.
Marka aan si guud uga hadalno rag iyo dumar waxaynu odhan karaa qiyaasta dabiiciga ah ee qof walba waa mid ka duwan tan qofka kale sababta oo ah xaga abuurka qofka iyo xaalada guud ee caafimaadkiisa ayaan qofna loogasoo qaadan karin qof kale qiyaas. Marka uu qofku gaadho da,da qaangaadhka waxaa soo wajaha nolol cusub oo kusoo koradha hab nololeedkiisii hore,waxaana qofku markaaba u baahdaa tarbiyad cusub oo lamid ah tii uu u baahnaa markii uu dhashay, sida ay hooyo iyo aabo usoo barbaarsheen isagoo yar ee uu ugasoo koray dhalaanimo aanu isagu naftiisa kagasoo badbaadeen ayuu maantana u baahan yahay cid gacanta ku qabata noloshiisa, waxaana culimada suluuga yacni dhaqanka ay sheegeen in waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka xiligan qaangaadhka loo baahan yahay inay barbaariso ama hogaamiso lagu tilmaamaa inuu waliba kaalinta koobaad soo dhaco aqoonta ama cilmiga, kaasi oo loola jeedo aqoon diini ah ama maadi ah.
Caruurta dayacanta xiliga barbaarinta ee ka hoosaysa da,da qaangaadhka waxaa la sheegaa inay kabadanyihiin kuwa dayacma xiligan qaan gaadhka waxaana shay wayn oo khatar ku ah mujtamac kasta lagu tiriyaa caruurta xiligan qaangaadhka kaleexata dhaqanka suuban. Tarbiyada fiican ee qofkasta oo qaangaadhay laga rabaa waxa ugu muhiimsan kol hadii aanay maskaxdiisa iyo waayo aragnimadiisu dhamaystirmin waa inuu ku tiirsanaado cid ku barbaarisa marxaladan cusub ee uu galay, si aanay uga xoog roonaanin dareenka kale ee shabaabnimo ee ku cusubi.
Xanuunada ku dhaca xubinta ama habdhiska taranka ee raga iyo dumarka xiliga ay waxyeelada ugu wayni soo gaadhaa waa xiligan uu qofku qaan gaadho ee uu kowsaday shabaabnimadiisa ilaa inta lagala gaadhayo afartan jirka.
Markasta oo uu qofku da,a iyo cilmi koradhsadoba waxa uu xasuustaa khaladaadka uu dhalinyaranimadiisii soo sameeyay, waxaanu ka qoomamoodaa nasiib darrada xiligaas kaga dhacday inuu kusoo dhaqmo dhaqan fiican. Qoys kasta oo jiraa kolba sida ay u habaysan yihiin xaga dhaqanka iyo aqoonta labada waalid ayay caruurta ay barbaarshaan u kala dhaqan iyo ficil duwan yihiin.
Umada uu qofku ku dhex korayo hadba waxa ku gedaaman degaankoodaas ayaa iyadana lagu tilmaamaa inuu macalin u noqdo caruuro badan oo koraya. Marka uu qofka dhalin yarada ahi fakaag ka helo gurigooda iyo waxbarashadiisa, waxa uu jaanis kala kulmaa sidii uu suuqa wax uga baran lahaa, taasi oo laga yaabo inay kaba awood badato dhaqankii uu waalidkiisa iyo macalinkiisu siinayeen.
Maanta oo aynu la dagaalanay gudniinka fircooniga ah waxaa habboon in la dhinac wado tarbiyad iyo barmaamij kale oo lagu wacyi galinayo dhalinyarta soo koraysa si looga hortago aafooyin iyo cuduro halis galin kara da,yarta mustaqbalka leh ee aan maanta maskax iyo garaad ama cilmi ay kaga joogsadaan waxyaabo badan aan gaadhin.
Xubnaha taranka ee qofka wixii cilad ah ee lasoo darsaa waa wax u baahan in qofwalba waxa shilaya la baadho, taasna waxaaba qasab ka dhigaya ciladaha keena xanuunadan ayaaba tiro badan aadna u kala duwan.
Sida aanay isku mid u ahayn qof gaboobay iyo qof da,yari ayaanay hadana iskugu mid ahayn qof da,a yar oo daalay iyo qof da,a wayn oo is dhawray. Your email address will not be published. Noocyada Kala Duwan Ee Xanuunada Ku Dhaca Xubnaha Taranka Iyo Xalka Fayoobaanta guud ee caafimaadka jidhka aadamuhu waxa uu had iyo jeer u wada shaqeeyaa si wada socota oo aanay xubini xubinta kale ka maraarmi karin, wixii xanuun ah ee lasoo darsa xubin kamid ah jidhkana waxaa la dareemada xanuunka iyo xumada jidhka intiisa kale.
Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Post a Comment. Xanuunka ku dhaca kelyaha ayaa noqday tobankii sano ee u danbeeyay mid ay ka cawdaan dadka soomaaliyeed mana jirin laba sano ka hor mashiinka kelyaha sifeeya deegaanaadada afka soomaaliga looga hadlo, immika se magaalooyinka sida hargeysa waad ka heleysaa. Taasi micnaheedu maaha in laga gudbay caqabadihii la xidhiidhay xanuunnada kalyaha waxaana jira hab sahlan oo leysaga daweyn karo xanuunka marka ugu horreysa ee uu ku asiibo, laakiin aqoonta aynu u leennahay oo yar iyo xidhiidhka dhaqtar inoo gaar ah oo aynan laheyn waxey keeneen in ummad badani ka naafoobaan kelyaha.
Dad badan ayaa qaba xanuunka kelyaha ee daba-dheeraada loona yaqaan Chronic kidney disease dadkaasi ma gartaan bilowga ,sababtoo ah calaamadaha hore oo ah waxa aad u yar ayey ku qaadataa sanado inay ogaadaan. Imaatinka marxalad kasta ee cudurka kelyaha aquuntu waa u awood. Ogaanshaha calaamadaha cudurada ku dhaca kelyaha ayaa kaa caawin kara inaad hesho daaweynta aad u baahan tahay iyo in aad dareento soo kabashadaada. Haddii adiga ama qof aad garanayso uu leeyahay mid ama ka badan calaamadahan soo socda ha welwelin marka hore is deji aad dhaqtar oo iska baadh dhiiga iyo kaadida.
Xusuusnow in badan oo calaamadaha ah waxaa keeni kara dhibaatooyin caafimaad oo kale. Adiga Sida kaliya ee aad u baahantahay ayaa ah in la ogaado sababta keentay calaamadaha marka waa qasab in aad aragto dhakhtarkaaga.
Kelyuhu waxey sameeyaan qashin-saarka ay ka mid tahay kaadidu, iyadoo xilliyada ay jirran yihiin kaadida laga dareemo isbeddel. Hadaba sidee isu badashaa? Kelyaha waxey leeyihiin dheecaan dareeraha kaasoo dhisa jidhkaada laakiin marka kelyaha xumaadaan wuxuuna sababaa barar lugaha ah, kuraamaha, cagaha, wejiga, iyo cududada gacmaha. Si fiican uma jiifsan kartid, xaqa sariirta ma gudan kartid ,shaqooyin badan kama qeyb qaadan kartid dhamaan waxey kugu keeni kartaa daal fara badan.
Kelyaha waxey qashin saar ku sameeyaa dhiiga wasaqeysan ,laakiin marka kelida ay bukto dhiigii dib ayuu ugu soo noqonayaa jidhka, dabadeed maqaarka ayuu cun cun ku keenaa ,ruuxa xanuunka nuucaa ah ku dhaca jidhkiisa oo dhan ayaa badalma finan ayaa ka soo yaaca aadna wuu isku xoqaa ogow dhibtaasi oo idil waa kelyaha fadhiya. Dhadhanka waxaad dareemeysaa sida qof cabay cabitaanka ka sameysan IRONwaxaa kaa xidhmaya appetite ma garanayo wax lagu yidhaahdo af soomaali appetite waa qofka oo raashiinka qaadan la.
Symptom 6: Nausea and Vomiting Calamaada lixaad. Xaaladan waa marka ruuxa gaadho waxa loogu yeedhi severe wuxuu keenaa matag aan waqti laheyn wax walba uu ruuxaasi cuno kuma hakanayaan calooshasido kale wuxuu leeyahay -Lalabo yulaaalugo waxba ma cuni karo waxeyna ugu sii daran tahay marka uu ruuxa ugu darsan yahay cudur kale oo uu dawadiisana qaadanayo sabab wey is diidayaan. Symptom 7: Shortness of Breath Calaamada 7aad neefta oo yaraata. Dhibaato kaaga dhacda xagga neefta waxey la xidhiidhi kartaa kelyaha laba siyaabood tan koowaad dheecaanka dheeraadka ah ee jidhka oo ku bata ilaa wadnaha iyo tan labaad oo ah dhiig-yaraan.
Oo sababi karta neefta oxygenta oo aad kuugu yaraata sida qof neef-qabatoobay oo kale. Xilyada ugu badan ee la dareema waa xiliga jiifka oo ruuxaasi ma seexan karo wuxuuna saacado badan ku qaataa fadhi, marka aad shaqo heysidna wadnaha ayaa aad kuu garaacma dabadeed waad daaleysaa mana sii wadi kartid shaqada.
Sababaha ugu badan ee sababa cudurada ku dhaca kelyaha ma sababaan xanuun kasta iyo mid kasta oo kaa qabta meel u dhow kelidalamana odhan karo kelida ayaa I danqeysa ,tusaale dadka qaar ayaa qabi kara xanuun kelida ah iyo xanuuno kale sida dhabar xanuun ama jeexa goljilicda dhinaca kuwaa ayaa laga yaabaa aakhiritaanka in ay saameeyaan kelyaha. Cudurka polycystiskt ee kelyaha Okla wuxuu keenaa fiix waaweyndheecaan ka buuxsama kelyaha hadii aan dhaqso loo daweyn waxey keeni kartaa in beerka waxyeelo soo gaadho.
Hadaba aqriste hadii calaamadahaa aad isku aragto fadlan si deg ah ula xidhiidh dhaqtar ku taqasusay xanuunada ku dhaca kalyaha. Sources : lifeoption,health. Siciid Xagaa Afrax. Posted by UnknownPublished at May 30, and have 0 comments. No comments:. Newer Post. Older Post. Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay Pink Iyo Brown-ka in ay yihiin goobaha ugu d Niikada Galmada iyo codka haweenka xiliga galmada socoto waxay kordhiyaan macaanka raaxada.
Sida la ogyahay dadka way kala duwan yihiin dooq ahaan, dad waxay ka helaan gabdhaha buuran dadna waxay jecelyihiin gabdhaha caatada ah, la Rag badan ayaa ka sheegta waayahan inay ka gaabiyeen xagga raaxaynta xaasaskooda, laakin halkaan waan kaaga soo gudbinaynaa arrimo aad ku Waxaa uu Eebo nasiiyey dareeno kala duwan dabeecado kale duwan dhaqan kala duwan iyo Jismi kala duwan Ruux walba oo koonkani saaran waxa uuWaxa jira xanuuno badan oo ku dhaca maskaxda dadka.
Waxa ay la mid yihiin xanuunada kale ee ku dhaca jidhka. Si la mid uun bay tahay in iyagana loola macaamilo loona dabiibo. Cudurada sida Kansarka, macanka iyo cudurada kale ee xiliyada kale haya dadka waa lala Nolan karaa cudurka maanka ku dhaca. Marka aan leeyahay xanuunada maskaxda waxan ka wadaa xanuunada dhimirka ee walida ah iyo kuwa ku dhaca maskaxda iyo xangulaha. Qaar ka mid ah lagama bogsan karo. Kolba waxa ay ku xidhan tahay xalada cudurka, xannunka nuca yahay iyo waxyaalo kale sida xiliga ku helay, sida lagu helay IWM.
Markaa waxaa lagama maarman ah in qof kasta iska daweeyo cudurada dhimirka iyo neerfeeyaha ku dhaca. Sidaa si la mid ah waxaa khalad ah in la quusgoyo ama la takooro qofka la jiran cuduran. Khubarada caafimaadka ee dabiiba cuduradan waa la mid dhakhaatirta kale khibrad gaar ah waxa ay u leeyihiin badhitaanka iyo dawaynta xaladaha la xiriira cuduradan.
Cuduradan qaarkood wakhti dheer bay u bahan yihiin in la daweeyo. Dawadooda jidhka ku gasha wakhti. Tusale ahaan, qof buka ee xanuunadani hayaan waxa laga yaabaa in dawadu wax u tarto mudo bil ama 2 bilood gudahood ah. Mararka nucas oo kale ah waxa dadka u samri kari waayan xanuunka daweentiisa oo waxa ay dalbadaan in wadaad loo geeyo ama meel kale lagu xidho si uu u ladnaado.
Waxa dhacda in dawadu jidhka gasho mudo wakhti ah oo qofku bogsado. Waxa kale oo iyadna jirta soo noqoqoshada xanunka dhimirka oo cudurada qaarkood marna ladnaadaan marna bogsadaan. Sababta ay maahmahdan u baxday waxa weeyi in ayna jirin dawooyin ama dhakhaatir dadka ka daweesa xaladahan caafimaad oo qofka ama suuqa lagu sidaynayey ama ay qaraabadiisu xidhi jireen.
Dhibwayna ay kala kulmi jireen bulshadu xaaladahan. Xiliyadan dambe dhulka Somalida waxa jira dhakhatir iyo kalkalisooyin dabiiba dadka ka jiran maskaxda. Cudurada maskaxda ku dhaca waa cuduro cilmiga saynisku uu baranayo siyaabaha badan ee loo dabiibo oo ay ku socoto baritanada cafimaadka ha noqoto daween iyo in qofka loo cawiyo si nafsiyan ah labadaba.
Waxa dhab ah in la daween karo cudurada dhimirka lagana bogsan karo. Waxa uuna shaki ku jirin in kumaanan dad ah ay ku bogsadeen dawooyinkooda. Waxa jira waxyaalo badan oo sababa in dadka qaarkood bogson.
Kuwa aan ladnaan weli waa la daween karaa. Astamaha laga yareen karaa oo waa la cawin karaa. Dadka oo barta in xanuunadadan la daween karo ayaa fure u ah in arintan la xiliyo. Waxa iyadna mesha ku jira in dadwaynaha la baro xanuunada dhimirka. Bulshadu waxa ay xaqa u leedahay wax aka mid ah inay helaan war sugan oo ku saabsan arimahan. Dad badan cudur laga daween karo ayaa ay u bukaan sanado badan iyagoo intaas meelo kale ku lumiya wakhti fican oo xanuunka lagu daween lahaa oo sababta in xanuunku dhawaco maskaxda qofka marka uu ku raago.
Ugu dambeentii waxa an kula talin lahaa bulshada inay bartaan cudurada maskaxda iyb xurumaha lagu dabiibo. Medical doctor and public health specialist View all posts by Jibril Handuleh. Like Like. You are commenting using your WordPress.Kalimadaha la adeegsado si loo baadho waa weedho caadi ahaan loo isticmaalo.
Tusaale ahaan, niyad jab iyo isku buuqsanaan. Taasi waxay sahli kartaa in la fahmo, laakiin caadinnimadoodu waxay keeni kartaa in dadku ay sahladaan inta ay la eg-tahay khatartoodu iyo curyaaminta ay xaaladahani mararka qaarkood keeni karaan. Isku buuqsanaantu waxay keeni kartaa walwal aan jirin oo joogto ah oo raad ku yeelan kara dhinacyada nolosha oo dhan. Dadku waxay dareemi karaan raaxo darro iyo hurdada oo aan u fiicnayn, waxay kale oo isku arki karaan calaamado muuqda sida garaaca wadnaha oo bata, caloosha oo qasan, laleemo iyo muruqyada oo koga.
Argaggaxa ku soo boodka ahi waa cabsi kadis ah oo si lama filaan ah ku bilowda. Calaamadaha waxa ka mid ah neefta oo gaabata, wadnaha garaaciisa oo khal-khala, laab xanuun, saxasho, cabsi iyo wareer.
Dr Ali Mao - Cudurada Ku Dhaca Maskaxda
Aragagaxu waxuu dhici karaa waqti kasta taasina waa waxa uu kaga duwan yahay cabsida ka timaada khatar dhab ah. Cabsidu waa baqdin aan sabab lahayn oo laga baqo xaalad ama shay khaas ah. Mararka qaarkood, cabsidu aad bay u xag jirtaa ilaa ay ka sababaan nolosha oo dhan oo hakad gasha. Cabsida noocyada caamka ah waxa ka mid ah cabsida ayawaannada, meelaha dheer dheer, duullimaadka iyo meelaha xidhan. Khajilaaddu Agoraphobia waxay sababi kartaa baqdin keeni karta in qofku guriga ka soo bixi waayo, isaga oo ka baqanaya in uu bannaanka u baxo.
Murugadu waxay keeni kartaa dhibaatooyin xagga hurdada ah, cuntada, iyo isku kalsoonaanta. Waxay khal-khalisaa dadku awoodda ay u leeyihiin in ay qabsadaan hawl maalmoodkooda waxuuna lug ku yeelan karaa caafimaadkooda. Schizophrenia waa kalmad loo adeegsado si loo qeexo khaladaad sababa fakarka iyo fahamka oo qaloocda. Calaamadaha waxaa ku jiri kara isla sheekaysi, maqalka waxaan jirin iyo buufiska. Dadku waxba way kala garan waayaan.
Schizophreniadu waa xanuunnada maskaxda kuwooda ugu khatarsan mid ka mid ah waxayna si khatar ah u dhaawici karaan kartida uu qofku u leeyahay inuu nolol maalmeedkiisa qabsado.
Sida caadiga ah waxa uu qofku nolol maalmeedka si joogto ah ugala kulmaa cadaadisyo kala …. Your email address will not be published. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Isbedelka Dhanka Dabeecadda iyo Hab- Dhaqanka qofka. Dadka maskaxda ka jirani waxay la kulmi karaan dhibaatooyin sida ay u fekeraan, dareemaan ama u dhaqmaan. Dhibaatooyinka yimaada waxaa ka mid ah jeermis dhagta, laabta iyo marinnada hawada laga neefso ee sare ku dhaca, shuban, iyo qallalyo, iyo marmar dhif ah encephalitis maskaxda oo barartaama waxyeello maskaxda gaarta.
Started by SomaliDoc. Waxa uu Uwanaagsanyahay Caafimadka Ciridka Bini aadamka Maxaa ka taqaanaa xanuunada ku dhaco qanjirka prostaatada Prostate gland. Sidee loo baaraa xanuunada maskaxda?
Noocyada xanuunnada maskaxda Sababaha keena maskax wareerka Caawinta Caafimaadka Maskaxda Qaraabadu sidey kuu caawin karaan? Meeqo Nooc oo Niyad Jab ah ayaa Jirta? Waa Maxay Calaamadaha Niyad Jabku? Pelvic inflammatory disorder PID : wa cabuq ama infection kudhaca xubinta taranka gabdha qas ahan gabdhaha qaba cudurada faafa sida jabtada wa xaladan waxay xirta tuboyinka waxayna sameysata guntimo ama buroyin yar yar.
Daaweynta xanuunada sinta waxay ku saleysan tahay sababta. Qaladka hoos u dhaca maskaxda ka sii dara ee saameyaa xasuusta, garashada, iyo shakhsiyadda. Cimibaadhso cusub ayaa sheegaya, in soonku ka dhigo unugyada qaba kansar in ay si'fiican uga jaawaaban daawooyinka loo qaato kansarka.
Earth Planet wakhtigan waa xiiso. Saameyn shaqada maskaxda sida: qofki oo lug ama gacan dhacdo, kaadida oo ku dhagta IWM. Sida caadiga ah, dulduleelada ama jeebabka sanqada waxaa ku jira hawa, laakiin markuu infekshan qaado waxaa ku aruuri karo dheecaan ay keento bakteeriyo ama feyras.
Soonku waxa uu caawiyaa daawaynta kansarka iyo ka hortaggiisaba, waa sida ay tibaaxayaan cilmibaadhisaha sanadadan danbe ay soo saarayaan saynisyahanadu". Khubarada caafimaadka ayaa qaba in baahi xoog badan loo qabo adeegyada caafimaadka dhimirka ee dalka Somalia. Ciddii ku soo gashaaba waa tii kaa baxda se laba ayuunbaa ay u dhaxaysaa: naf kolka ay soo galayso kurbata kolka ay baxaysana muusoota oo ay wehel u noqoto dharaaraha xusuuseed ee ay nolosheeda kugu qaadatay ama mid kolka ay soo galaysona muraaqoota maalinta ay kobtan maanta oo kale joogtana dibno qoslaaya iyo dareen ilmaynaaya noqota.
Faa'iidooyinka lagu sheegay timirta waxaa kamid ah caloosha oo ey socodsiiso. Dhibaatooyinka jadeecadu waxay gaartaa 15kii carruur ahba hal. Waxqabad iyo daaweyn gaaban— La talin waqti oo xoogga lagu saarayo dhibaato gaar ah.
Marco Gallio, Ph.DAAWEYNTA DHAMAAN CUDURADA GUUD Xarumaha caafimaad ka website yadan ayaa kuu diyaariyeen daaweyn rasmi ah inshaa allaah dhamaan xarumaha caafimaad ka iyo dhaqaatiir tooda ba waxa heegan buuxa u yihiin sidii ay u caawin lahaayeen dadka soomaaliyeed ee xanuun sanaya meel kasta oo ay dunida ka joogaan daawooyin iyo daaweyn rasmi ah waxaa diyaar idiin la ah dhamaan xarumaha caafimaad ka ee website yadan la soo xiriir dhaqaatiirta si aad u hesho xal caafimaad oo waara inshaa allaah mahad sanidiin.
Tuesday, January 31, Qaar kamida xanuunada indhaha ku dhaca. Marka uu kugu dhaco gulukooma, dheecaan ayaa buuxsama isha, taa soo cadaadis saarta xagga dambe ee isha. Cadaadis kaasi waxa uu dhaawac u geystaa dareemaha iftiinka optic nerve waxana uu sababaa lumis aragga ah. Badanaa marka hore waxaa wax yeelo soo gaartaa aragga dhinacyada, taa soo ay ku xigto aragga xagga hore. Noocyada Gulukooma Laba nooc ee ugu weyn gulukooma waa: 1: Gulukooma xagal furan open-angle glaucoma badanaa ma laha calaamado ilaa ay ka gaarayso heer fog.
Si tartiib ah ayuu cadaadisku waxyeelo u gaarsiiyaa dareemaha iftiinka mudo dheer ka dib. Taasi waxay saameysaa labada indhood ba laakiin waxa laga yaabaa inaad marka hore calaamado ku aragtid hal il kaliya. Lumid aragga oo joogto ah ayaa ku dhici karta qofka maalin gudaheed. Xaaladaha Halista ah. Waxa aad halis u tahay inaad yeelatid gulukooma haddii uu jiro.
Calaamadaha Gulukoomada waxa laga yaabaa in ay san yeelan wax calaamado ah ilaa ay ka imaanayso lumidda aragga Calaamadaha kale ee cudurkaan aad ku arki kartid waxa ka mid ah: 1: Aragtida oo isku darsanta 2: iftiin ku wareegsan wax iftiimaya Halos 3: Lumidda aragga dhinacyada peripheral vision ka 4: Arag si weyn u dhuuban Tunnel vision 5: Indhaha oo casaada qofka 6: Xanuun indhaha ah oo daran 7: Lallabo iyo matag LUMISTA ARAGA VISION LOSS Calaamadaha ugu tirada badan ee lagu yaqaano lumista aragga waa aragga oo si joogto ah u yaraada, iyadoo waxyaaba ha fog ka la garasha doodu dhib sii noqoto.
Hase yeeshee, waxa jiri karaan calaamado kala duwan oo ay leedahay lumidda araggu oo aan ahayn yaraanta aragga. Tusaale ahaan: 1: Guluukoomada glaucoma wax yeela deedu hooseyso waxay keeni kartaa xanuun aan badnayn, arag ceeryaamo ku jirto iyo wareegyo ama goobo leh midabka qaanso roobaadka oo lagu arko dhinac yada wixii iftiin leh.
Calaamadaha lumista araggu waxay si weyn ugu xiran yahay sababta keentay. In aragtida lunto. Xaaladaha qaarkood waxay si degdeg ah u keeni karaan lumid arag, halka qaar kalena ay si tartiib ah u keeni karaan burbur ku dhaca aragga.
Dad badan ayaa leh dhibaatooyin aragga ah oo u baahan inay gashadaan muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha contact lenses.
Dadka leh fogaan aragga waxa dhib ku ah aragga waxyaabaha u dhaw. Sababta taa keenaysaa waxa weeye kubbadda isha oo aad u gaaban, taasoo keenaysa in falaaraha iftiinka ee ku wareegsan ashyaada ay gaaran xagga dambe ee xuubka dambe retina ka hor intaan qaybta cad cornea iyo lensisku qaloocin falaaraha iftiinka. Fogaan araggu waxa uu badanaa sii xumaadaa marka aad sii gabowdid, waxa kale oo uu saameyn karaa habka aad u aragtid ashyaada fogfog.
Dadka leh fogaan arag waxay badanaa u baahan yihiin inay xirtaan muraayado sixid arag sida muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay wax u akhriyaan, u qoraan una qabtaan hawlo faahfaahsan. Dadka qaba dhawaan aragga waxa dhib ku ah aragga waxyaabaha ka fogfog sababta oo ah kubbadda isha ayaa aad u dheer. Tani waxaa looga jeedaa in qiyaasta ay isku jiraan qeybta kore ee isha iyo xubka danbe retina ayaa kala dheer.Started by SomaliDoc. Started by Qaalib.
Started by Aamina Started by Nabadoonka. Started by Sadia. Started by Abdinasir Abdulahi Hashi. Started by PrincessMuni. Started by Munim.
Locked Topic Sticky Topic Poll. Somali Medical Forums. Welcome, Guest. Please login or register.
Maxaad ka taqaanaa Xanuunka maskaxda ku dhaca ee schizophrenia?
Home Help Login Register. Fahmitaanka Iskizofereeniyada Schizophrenia? Maxaa Sababa Cudurka Iskitsoofiriiniyada? Xanuunkii Dhakhaatiirtu Ku Sheegtay Trump! Waa Maxay Calaamadaha Niyad Jabka? Su'aal: Sideen u raadiyaa su'alihii aan soo qoray? Waa Maxay Neerfo? Su'aal: Dhaawac maskax gaaray malaga kaban karaa?
3 inch toilet flapper walmart